एप्पल-उपकरणहरूमा उत्पादन विकासकर्ताहरू सधैं तरिका सुधार र प्रयोगकर्ता आफ्नो ब्रांडेड ग्याजेटहरू सञ्चालन गर्न सहज बनाउन उत्सुक हुन्छन्। त्यसैले त्यहाँ विभिन्न उपयोगी आवेदन र विकल्प हो। जस्तै, iMessage। यो विकल्प कसरी सक्षम? यो के हो? हामी किन चाहिन्छ र यो आवश्यक छ कि छैन भनेर? यी सबै प्रश्नहरूको जवाफ हो।
तपाईं iMessage बारी अघि, तपाईं वास्तवमा, यो अनुप्रयोग छ, के बुझ्न आवश्यक छ। सबै को पहिलो यो एक उपयोगी विकल्प कि एप्पल-प्रविधिको मालिक प्रत्येक अन्य Shareware कुराकानी गर्न अनुमति दिन्छ। कुनै पनि प्रयोगकर्ता आईप्याड, आईफोन, नयाँ पुस्ता आइपड अन्य पार्टी, फोटो, भिडियो पाठ सन्देश पठाउन सक्छौं। स्वाभाविक, आवेदन मात्र कम्पनी को "घर" मा काम गर्दछ - एप्पल। अन्य कुनै पनि कम्पनी बस iMessage मा संवाद सामेल संभावना छैन। यो अनुप्रयोग कसरी सक्षम? कि पछि थप।
काम के कारणले
त्यसैले किन शेयरवेयर छ? केही कहिल्यै पूर्ण निःशुल्क छ किनभने म अवस्थित छैन। यहाँ, मुद्दा मूल्य इन्टरनेट प्रदायकको सीमित माग छ। हो, अनुप्रयोग विशिष्ट सेवा प्रदायकलाई बाध्यकारी बिना वेब मार्फत विशेष काम गर्दछ। बस राख्नु - सिम कार्ड यहाँ आवश्यक छैन। मात्र इन्टरनेट जडान छैन। यो Conventionality र पछि यो लुकाउन पनि, नेटवर्क भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। राम्रो वा, यदि हामी सार्वजनिक क्षेत्रमा "khalyavnykh" वाइफाइ बारेमा कुरा गर्दै छन्। र उहाँले मुक्त थप र प्राय र धेरै ठाउँमा हुन्छ। त्यसैले, यस्तो अनुप्रयोगहरूको उपस्थिति प्रयोगकर्ताहरूको लागि वास्तविक Lifesaver भएको छ।
धेरै iMessage जस्तै यस्तो उपयोगी अनुप्रयोग सबै आकर्षण सराहना गरेका छन्। कसरी आफ्नो उपकरणमा यसलाई सक्षम गर्न? हो, सजिलो केही छैन! तपाईं "संदेश" सेक्सनमा "सेटिङ" जान आवश्यक छ। सही साइडबार मा iMessage लिखित गरिनेछ। यो विकल्प कसरी सक्षम? तपाईं बस छेउमा गर्न टगल स्विच तान्न आवश्यकता हो, त्यसैले उहाँ हरियो रंग परिवर्तन भयो। सबै! आवेदन तपाईं आफैलाई अनुरूप यो अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ, सक्रिय छ। चेतावनी! आवश्यक सक्रिय इन्टरनेट जडान (: पनि3जी, वाइफाइ हुनत कुनै पनि) हुन छ। कि पछि तपाईं र कुनै पनि समयमा कुनै पनि ठाउँमा अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सबै। उत्तरार्द्ध विशेष महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी धेरै यात्रा गर्नेहरूका लागि।
तपाईं आईफोन5मा iMessage बारी अघि, कि बारेमा थप जान्न आवश्यक छ, र अन्य कुराहरू बारे। मोबाइल सिस्टम जारी iOS5बस अवस्थित छैन पहिले यो विकल्प गर्न सञ्चालन गर्दा उपयोगी अनुप्रयोग प्रयोगकर्ताहरूलाई उपलब्ध गरिएको थियो! केवल मोडेल मा सुरक्षित, आईफोन किन्न जाँदै हुनुहुन्छ गर्नेहरूलाई एक टिप्पणी। छैन तुरुन्तै सम्झना: बस पुरानो संस्करण कम्पनी समर्थन यसलाई विकसित रूप गुमाउन, धेरै जो बस छैन सानो पुरानो ग्याजेटहरू "पुल" हो बढी उपयोगी विकल्प, परिचय। आईफोन 5, खैर, मुक्त सन्देशहरू विकल्प उपलब्ध भए जहाँ परिवार, को "स्याउ" को पहिलो थियो। र यो एक furore सिर्जना! मा पहिलो हुनत जब टेलिकम संचालक संग काम गर्न, र केही कमीकमजोरी देख्न सकिएन। उदाहरणका लागि, जब नयाँ सिम कार्ड तल अनुप्रयोग काम गर्न छोड्यो जो पछि केही आन्तरिक सेटिङहरू, ल्याइएको हो। खोटरहित ढंगमा, "त्रुटिहरू", "ढिलाइ" तर अन्त मा, विकासकर्ताहरूले समारोह घडी को कल जस्तै काम गर्न थाले, जो पछि यसको कमीकमजोरी, सबै अंतिम रूप छन्।
लाभ के हुन्
सबै भन्दा ठूलो फाइदा - gratuitousness! यो लामो थप र प्राय देखिने असीमित इन्टरनेट र "Freestuff" वाइफाइ संग मोबाइल शुल्क प्रयोग ग्याजेटहरू को मालिक भएको छ। किन तपाईं आफ्नो प्रियजनलाई आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले चाहना, पठाउन मुक्त गर्न भने, एसएमएस र एमएमएस लागि तिर्नुपर्छ। र यो अलग तपाईं कति टाढा कुरा छैन। हो, त्यही विकल्प धेरै अन्य व्यावसायिक र निःशुल्क आवेदन छन्, तर यहाँ (कसरी सक्षम, पहिले नै माथि वर्णन) iMessage तिनीबारे राम्रो छ। पहिले, तपाईं पनि फोन नम्बर आवश्यक छैन। मात्र एक व्यक्ति नम्बर - एप्पल आईडी - र ई-मेल ठेगाना, सक्रिय जब स्वतः उपकरण संलग्न छ जो। दोश्रो, को iPhone सन्देशहरू पठाउने गर्दा त्यहाँ आवेदन मा जान कुनै आवश्यकता छ। स्वतः कसलाई र कसरी पठाउन गर्न निर्धारण एसएमएस-कू। यो, पाठ्यक्रम, "विद्रोह" को एक प्रकारको, प्रयोगकर्ता रूपमा, सिद्धान्त, उहाँले तपाईंको सन्देशहरू व्यवस्थापन कसरी गर्ने निर्णय गर्नुपर्छ। तर नवीनता साँच्चै उपयोगी छ, र पनि पैसा बचाउँछ।
यो कसरी काम गर्छ
तपाईं iPhone मा iMessage बारी अघि, तपाईं राम्ररी बुझ्न आवश्यक छ। प्रयोगकर्ता सन्देश प्रेषक छनोट डायल। सबै अगाडी यो अपरेटिङ सिस्टम निर्णय लागि। छिटो र नि: शुल्क - प्राप्तकर्ता iMessage छ भने, सन्देश विशेष च्यानलमा लाग्छ। भने, के पैसा लागि सिम कार्ड पठाउन हुन्छ। सकेसम्म सरल सबै! छ जो Cercullar को आईप्याड, संग, कुरा पनि छरितो छन्। सन्देशहरू च्यानल iMessage मार्फत जानुहोस्। तर ती मात्र गर्ने पनि यस आवेदन छ। को "एन्ड्रोइड", "windose" र अन्य सञ्चालन प्रणाली सन्देश पठाउन हुन सक्दैन!
आफूलाई लागि सेटिङ
iMessage समारोह स्विच अघि, थाहा आवश्यक छ र यो कसरी कन्फिगर गर्न सकिँदैन। प्रयोगकर्ता गर्न धेरै अनुमति छैन। तर वास्तवमा त्यहाँ पनि पर्याप्त छ कि! सबै को पहिलो - रिपोर्ट पढ्नुहोस्। प्रेषकले साक्षात्कारदाता उहाँलाई सन्देश पढ्न वा देख्न कि निर्णय गर्छ। दोश्रो, प्रयोगकर्ता केही सम्पर्क ब्लक गर्न सक्नुहुन्छ। ती, उदाहरणका लागि, जो आफ्नो लिङ्कमा लागि कुनै पनि कारण को सद्गुण द्वारा। तेस्रो, तपाईं सन्देशहरू को अवधारणा अवधि सेट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि, perpetuity मा। स्थानहरू तिनीहरूले धेरै लिन छैन अप, र तिनीहरूले एकदम महत्त्वपूर्ण जानकारी अवस्थित गर्न सकिन्छ। चौथो, तपाईं भिडियो र अडियो मा एक समय सीमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणका लागि,2मिनेट। यो आवाज सन्देश रेकर्ड वा एउटा सानो भिडियो अभिवादन पठाउन पर्याप्त छ। खैर, चलचित्र र भिडियो सिस्टम पठाउनका लागि एक राम्रो खाता दिन्छ कि छुट्टै मुक्त आवेदन छ।
स्वाभाविक, एप्पल कम्पनी यसको कम्प्युटर प्रयोगकर्ता बेवास्ता गर्न सकिएन! तिनीहरूले पनि उपलब्ध iMessage! पहिले तपाईं आवश्यक ओएस एक्स पहाड सिंह स्तरवृद्धि गर्न। मात्र देखि यो संस्करणमा भने समारोह सन्देशहरू उपलब्ध छ। मैक मा iMessage कसरी सक्षम? हो, बस आफ्नो एप्पल आईडी सेट गरेर डेस्कटपबाट आवेदन चलान। र त्यसपछि यो कार्यक्रम को मुख्य लाभ खुल्छ! यो एक उपकरण (जस्तै, आईफोन) मा एक संवाद सुरु गर्न, र अर्को मा जारी (जस्तै, एक म्याक) सम्भव छ। एक को अनिवार्य सर्त - सबै ग्याजेटहरू एक व्यक्तिगत नम्बर बाँधिएको गर्न आवश्यक! सबै, कुनै सिम-कार्ड, पैसा सीमा।
HTC इच्छा 310: समीक्षा, फोटो, मूल्य र सुविधाहरू
फोन Windows मा आधारित: मोडेल, वर्णन, विनिर्देशों, मूल्यांकन, समीक्षा
Nokia Lumia 620. मूल्य, समीक्षा, सेल फोन डाटा "nokia"
स्मार्टफोन "सैमसंग ग्यालेक्सी संग3Duos": समीक्षा, अवलोकन, विशेषताहरु र विवरण। सैमसंग मोबाइल फोन
Nokia 8110: सुविधा र किबोर्डको उपस्थिति
कसरी ग्यालेक्सी मा मिति परिवर्तन गर्न: विस्तृत निर्देशनहरू
आफ्नो मुख मा खराब स्वाद के गर्छ?
पुस्तक लक: कुञ्जी कस्तो र किन आवश्यक छ?
साना मत्स्यस्त्री, Ariel ( "डिज्नी")। रूप, वर्ण, रोचक तथ्य
कथा र अभिनेता, "आफ्नो आमाबाबुको अज्ञात"
आक्षेप देखि Cutlets: फोटो संग नुस्खा
छायाबाट विभाजन: प्रविधि र प्रतीकहरूको व्याख्या
"ग्यारेज" - एक तातो गर्मी को लागि एक पेय
क्रियाकलापरेखाचित्र: यो आवश्यक र यो कसरी निर्माण गर्न छ किन
Eclat - वास्तविक महिला लागि अत्तर
हिप संयुक्त, एक्स-रे: लाभ र बेफाइदा को विशेषताहरु